ဘဏ္ဍာရေး နှင့် ဥပဒေရေး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှုံမှု၊ စာရင်းခွဲမှု၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု စီမံခန့်ခွဲရေး၊ အများပြည်သူနှင့် ဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရေး၊ အဆိုပြုချက်များပြုစုခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများ ရေးဆွဲခြင်း၊ သဘောတူညီချက်များ၊ မူပိုင်ခွင့်
စီအာအက်ဖ်၊ ဆေးရုံဆေးခန်းသုံး ပရိုတိုကော/စမ်းသပ်မှုများ၊ စီအာအေ၊ အိုင်စီအက်ဖ်၊ အိုင်အက်ဖ်ယူ၊ အိုင်အာဘီ၊ အိုင်ဗီအာ၊ အမ်ဘီအာ၊ ပီအိုင်၊ ပီအာအို၊ ပီဒီ၊ ပီအမ်၊ အက်စ်အေအီး နှင့် အက်စ်အိုပီ၊ အက်စ်ဂျေအေ၊ တီအာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စက်ကိရိယာများ
မော်တော်ယာဉ်များ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနံဓာတုပစ္စည်းများ၊ စတီးလ်၊ ချည်မျှင်၊ အာကာသသိပ္ပံ၊ စက်ယန္တရား၊ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း၊ ဗိသုကာ
သတင်းအချက်လက် နည်းပညာ / နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်လ်
အိတ်ချ်/ဒဗျူလူ၊ အက်စ်/ဒဗျူလူ၊ အေအိုင်၊ လက်လုပ်၊ ဂိမ်း၊ ဗီဒီယို၊ အယ်လ်၁၀အန်၊ ဂျီ၁၇အန်၊ အီလက်ထရောနစ် သင်ကြားရေး
ကေ-ယဉ်ကျေးမှု၊ ကေ-ဖျော်ဖြေရေး၊ ကေ-အားကစား၊ ကေ အစားအစာ <=> ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကမ္ဘာ့ အနုပညာ၊ ကမ္ဘာ့ အားကစား၊ ကမ္ဘာ့ အစားအစာ
အယ်လ်၁၀အန်၊ ဂျီ၁၇အန်၊ ယူကျု့၊ အင်စတော်ဂရမ်၊ အက်စ်အန်အက်စ် ကွန်ယက် (အင်္ဂလိပ်<=>ကမ္ဘာ့ ဘာသာစကား) ဘာသာစကား ၃၀၀ ကျော်နှင့် အထက်
အစိုးရ အေဂျင်စီများ နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ
တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံများ၏ မူဝါဒများ နှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကြည်းတပ်/ရေတပ်/လေတပ်များအတွက် အဆင့်မြင့် လက်နက်များဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များ၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အများပြည်သူနှင့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ
ှု ကုလသမဂ္ဂ၏ တရားဝင်ဘာသာစကား ၈ မျိုးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ။ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ ရုရှား၊ အာရေးဗျ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်
ဆက်ဆံမှုတို့၏စတင်ရာဖြစ်သော ကိုရီးယား ,မှတစ်ဆင့် ဖော်ထုတ် ဆက်သွယ်လိုက်ကြပါစို့
အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့် အချက်အလက်	More
လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ပြနေသဖြင့် ယုံကြည်သင့်ပါသည်။ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများ နှင့် အစိုးရအေဂျင်စီများစွာက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုကြသူများအား အကောင်းဆုံး ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
★RedRhino Communications ။ ။ "နယ်ပယ်အသီးသီးမှ သီးခြားအခေါ်အဝေါ်များနှင့် ပက်သက်ပြီး ကောင်းမွန်တိကျစွာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်ပေးသဖြင့် စိတ်ကျေနပ်မှုရခဲ့ပါသည်" - ဓာတ်လှေကား ကျွမ်းကျင်သူ
★Ultra Translate ။ ။ "ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းနှင့်အတူ နည်းပညာကဏ္ဍ၊ အစိုးရကဏ္ဍစသည့် နယ်ပယ်များစွာအတွက် လုပ်ငန်းများစွာ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ကိုရီးယား နှင့် အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာလုံးတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်းက အလုပ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အရေးပေါ်ပြီးအောင်လုပ်ရမည့်အလုပ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုရီးယား/အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်အလုပ်များအတွက် အားပေးထောက်ခံပါသည်" - ပြင်ပမှဝန်ဆောင်မှု အသုံးချရေး မန်နေဂျာ
★Korea Hydro & Nuclear Power ။ ။ "ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ သဘောသဘာဝ အခက်အခဲများကြောင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစကားအများအပြားအတွက် ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းက ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ စာစစ်ခြင်း နှင့် အချောသတ်ခြင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်များရှိသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်အချိန်တွင်း အလုပ်များကိုပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်" - Korea Hydro & Nuclear Power၊ စျေးကွက် ပေါင်းစပ်ကွပ်ကဲရေးမှူး
★Eisai Korea ။ ။ "ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအား မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံလေ့ရှိပါသည်။ ပိုအရေးကြီးသည်မှာ ဘာသာပြန် အရည်အသွေးသည် အတိုင်းထက်အလွန် ကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်" DongHyung Shin၊ အာအေ ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ အာအေ နှင့် စျေးနှုံးသတ်မှတ်ရေး | Eisai Korea Inc.
★Janssen Korea ။ ။ "စျေးနှုံးမေးမြန်းခြင်းနှင့်ပက်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ချက်ချင်းဆိုသလို ဖြေကြားပေးပါသည်။ အလုပ်ကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အလုပ်အပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများမှာလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။" - Elaine Hwang, စီနီယာ အာအေ ကျွမ်းကျင်သူ
★Technical Translation Agency ။ ။ "ကိုရီးယား ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီ လိမိတက် သည် စိတ်ချယုံကြည်ရသော အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဘာသာပြန်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများ မြှင့်မားကြောင်း နှင့် အလုပ်နောက်ကျအပ်ခြင်းမရှိကြောင်းကို အလုပ်ဖြင့်သက်သေပြခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိုလိုလားလား ထောက်ခံပေးပါသည် - Daniela Haunold - TTA ၏ ပြင်ပမှဝန်ဆောင်မှု အသုံးချရေး မန်နေဂျာ
ချွန်ဟ ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်သင့်သည့် အကြောင်းရင်းများ (ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသာချက်များ)
★တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသည့် ဝန်ဆောင်မှု။ ။ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းဖြင့် စာစစ်ပေးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် စာစစ်ပေးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း နှင့် တိကျသေချာသည့် ဘာသာပြန်ခြင်း
★၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ခြင်း။ ။ ကမ္ဘာ့အနှံ လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း ၅၀ ၀၀၀ ကျော် ပြီးစီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းဆယ်ချီကြာပြီဖြစ်သော လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ
★ဘာသာစကားအများအပြားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း။ ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ အခြားဘာသာစကားပေါင်း ၃၀၀ ခန့်အထိ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ခြင်း
★အရည်အသွေး အာမခံခြင်း။ ။ သုံးနှစ်အထိ အာမခံပေးခြင်း/ လိုအပ်ပါက ဘာသာပြန် စာရွက်စာတမ်း ထုတ်ပေးခြင်း
★မြန်ဆန်တိကျသော ဝန်ဆောင်မှု။ ။ ဝန်ဆောင်ခ ၃၀-၅၀% ခန့်ပိုပေးရုံဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ
★ပြဿနာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးခြင်း။ ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အခြားကုမ္ပဏီများ၏ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပက်သက်သည့် ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးခြင်း
★လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ။ ။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ၏ ကိစ္စအဝဝကို ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးခြင်း => ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ အခြေအနေ နှင့် အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ သုံးသပ်ပေးခြင်း => ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ တစ်ဉီးချင်းစီအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေရအောင် ဆွေးနွေးအဖြေထုတ်ပေးခြင်း => ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကိစ္စအဝဝကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း
အရည်အသွေး အာမခံ စနစ်
ယုံကြည်မှု ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သော ကိုရီးယာ ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော အလွတ်ဘာသာပြန်ပညာရှင်များစွာပါဝင်သည့် ဘာသာပြန်ကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုလည်း စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်။	.
လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနေသူ အရေအတွက်
သင်သိလိုသည်များရှိပါက ကိုရီးယား ဘာသာပြန်ကုမ္ပဏီ (ကေတီစီ) မှ ဝန်ထမ်းထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာပြန်/စကားပြန် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စျေးနှုံးများ၊ ကြာမြင့်ချိန်၊ အလုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ လျို့ဝှက်ပေးထားမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော ဘာသာစကားများ စသည့်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
အလုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်
မိတ်ဆွေ အပ်ထားသော အလုပ်၏ ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ အလုပ်ပြီးမည့်ရက်ကို ပြောင်းရွေ့ခြင်း နှင့် အခြား အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများ
အခွန် ဘောက်ချာ နှင့် ငွေပေးချေမှုများနှင့် ပက်သက်သော မိတ်ဆွေ၏ မေးခွန်းများကို ချက်ချင်းဆိုသလို ဖြေကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။	.
ကေတီစီ ရှိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွတ်ဘာသာပြန်အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ .
ဖုန်းနံပါတ်။ ။ (၈၂၂)-၃၇၇၅-၀၅၁၅ / အီးမေးလ်။ ။ @	: (822)-3775-0515
ရုံးချိန်ပြင်ပ အရေးပေါ်စုံစမ်းမှုများအတွက် ။ ။ @ သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့နိုင်ပါသည်	: Rose Lee